बलात्कारका घटना बढ्दा नारीमा त्रासदी, किन रोक्न सकिएन बलात्कार ? – Mission Khabar
बलात्कारका घटना बढ्दा नारीमा त्रासदी, किन रोक्न सकिएन बलात्कार ?
मिसन खबर २७ भाद्र २०७५, बुधबार १३:२१
काठमाडौं– पछिल्लो समय दैनिक जसो बलात्कारका घटना बाहिर आइरहेका छन् । सडकदेखि संसदसम्म आलोचना र चर्चा पाइरहेको बलात्कारका घटना किन भए भन्नेमा सबै अनभिज्ञ छन् । फाँसीसम्मको कारबाहीको आवाज उठिरहेको बलात्कारको पछिल्लो अवस्था बिकराल छ ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको एक बर्षको तथ्याङक
– १ हजार ४ सय ८३ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी
– काठमाडौंमा मात्रै २ सय बढी बलात्कृत
– हरेक २ वर्षमा बलात्कारका घटना दोब्बरले बढ्दै
– प्रदेश १ मा ३ सय ८४ वटा बलात्कार
राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनका कारण प्रहरीमा नपुग्ने बलात्कारका घटना पनि निक्कै धेरै छन् । अझ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था दैनिक चार/पाँच र महिनामा एक सय वटा बलात्कारका घटना भैरहेको दाबी गरिरहेका छन् । मनोवैज्ञानिक करुणा कुवँर विष्ट समाजमा छोराछोरीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणदेखि घरपरिवारको चालचलन, सस्कार र वातावरणले बलात्कार तथा हिंसा बढेको बताउँछिन ।
कानुनविद्पनि बलात्कारको भयाबह अवस्था रोक्न कडा दण्डको सजाय गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अधिबक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन– कमजोर न्याय प्रणाली, बलात्कारीलाई संरक्षण र उन्मुक्ती दिइदा घटना दोहोरिने गरेको छ ।